Snapdragon 845 သည် 1.2 Gbps အမြန်နှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည် Androidsis
Qualcomm သည် Snapdragon 845 ကိုအစားထိုးရန်နှင့်နောင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းများအပါအ ၀ င်အခြားမျိုးဆက်သစ်ဖုန်းများအားပါ ၀ င်မည့် Snapdragon 835 ကိုအဆင့်မြင့်သည့် Snapdragon XNUMX တွင်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည်။ က galaxy S9, LG G7 နှင့်အခြားသူများ။
Snapdragon 845 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသေးစိတ်မသိရသေးသော်လည်း Processor အသစ်သည် Snapdragon X20 LTE modem ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး 1.2 Gbps အထိမြန်နှုန်းဖြင့်ပို့ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီအချက်အလက်ကနေတိုက်ရိုက်လာပါတယ် Qualcomm ၏အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်Snapdragon 845 SoC တွင် Snapdragon X20 LTE modem တပ်ဆင်ထားသည်။
Snapdragon X20 LTE modem ကိုဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပထမဆုံးကြေငြာခဲ့ပြီး၊ အမျိုးအစား 18 LTE modem အထိ download speeds နိုင် 1.2 Gbps.
အကယ်၍ သင်သည် SoC ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါက Qualcomm X20 modem အသစ်သည်၎င်း၏ 1.2 GBit / s downlink နှင့်အဆုံးသတ်မည်။ ဟုတ်တယ်၊ Snapdragon 845. (LinkedIn မှ) pic.twitter.com/lMd5lcovJf
- Roland Quandt (@rquandt) ဇြန္လ 11, 2017
Gigabit အမြန်နှုန်းအပြင် Snapdragon X20 ကိုလည်းအချို့ဖြန့်ချိမည် အမြန်နှုန်း 150 Mbps ခွင့်ပြုတဲ့နည်းပညာကတဆင့် နှစ်ခု 20 MHz ခညျြအနှောစုစုပေါင်း။ Snapdragon 835 နှင့်လာမည့် Snapdragon 845 ကဲ့သို့ X20 LTE modem ကို 10nm FinFET လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်လည်းထုတ်လုပ်မည်အချို့က 7nm ချစ်ပ်ဖြစ်မည်ဟုစိတ်ချကြသည်။
Qualcomm ၏အဆိုအရ Snapdragon X20 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ထောက်ခံမှု 5G ကွန်ရက်များဤကွန်ယက်များသည်နှစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီစမ်းသပ်မှုများအတွက် device ကိုထုတ်လုပ်သူမှ၎င်း၏ modem အသစ်နမူနာအချို့ကိုထောက်ပံ့ထားပြီး။
Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်စတင်မိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အထိ Qualcomm သည်၎င်းပရိုဆက်ဆာတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအလုပ်လုပ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ Snapdragon 836, Samsung Galaxy Note 835 တွင်ထည့်သွင်းမည့် Snapdragon 8 ၏တိုးတက်လာသောထုတ်ဝေမှု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Snapdragon 845 သည် 1.2 Gbps download speed ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
LG သည်လာမည့် ၂၀၁၇ Google Pixel ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်